Eyamanzi eMkhanyakude isewumqansa – Bayede News
Eyamanzi eMkhanyakude isewumqansa
“SEKUYACACA ukuthi uHulumeni oholwa nguKhongolose nguyena
Izethembiso ngokuxazululeka kwenkinga yamanzi eMkhanyakude zindala njengoba kwaze kwafika owayenguNgqongqoshe Wezamanzi Nenhlanzeko uNomvula Monkonyane komunye umcimbi
“SEKUYACACA ukuthi uHulumeni oholwa nguKhongolose nguyena obuye abenesandla emibhikishweni yomphakathi yokufuna izidingo ethe chithi saka nezwe negcina isiholele ekucekelweni phansi kwempahla nezingqalasizinda” Lawa ngamazwi aphimiswe nguMnu uSabelo Nkwanyana olwela amalungelo omphakathi owakhele uMasipala uMkhanyakude enyakatho yeKwaZulu-Natal.
Izakhamuzi ezakhele lo Masipala sekuneminyaka zikhala ngokwentula amanzi ekubeni endaweni kunedamu iJozini elihlomulisa kuphela abalimi abamhlophe bendawo nezilwane zasendle. Kuthiwa abalimi abamhlophe okuyibona abanobunikazi baleli damu bala ukhasha uma umphakathi woHlanga ongaphansi kwaMakhosi akhele uMkhanyakude nawo ucela ukuhlomula ngamanzi asuka kuleli damu elakhiwa ngesikhathi sikaHulumeni omdala ngenhloso yokuhlomulisa wonke umuntu oyisakhamuzi saseMkhanyakude.
Okubuhlungu leli damu selincisha umphakathi wendawo amanzi liphinde liphakele omasipala abangomakhelwane namazwe angomakhelwane okuyi-Eswatini neMozambique. UNkwanyana ukusho lokhu ngemuva kokuthi izakhamuzi zakule ndawo obesekuneminyaka zikhala ngokwentula amanzi ekubeni zafakelwa izingqalazinda kodwa kungaphumi neconsi emapayipini amanzi egcine ededeliwe njengoba esegeleza kuwona.
“UHulumeni izikhalo zethu uze wazisukumela ngoba sesivuke indlobane singumphakathi sangenela umbhikisho onodlame njengoba besivale zonke izintuba ezingenela eJozini kanye nomgwaqo omkhulu u-R22 ebesuvalwe ngezinguzunguzu zamatshe nezihlahla. Kusho ukuthi loHulumeni yiyona ndlela ozwa ngayo ukuze ukusukumele izikhalo zethu ngoba uma esacelwa kahle uyathalalisa,” kusho uNkwanyana.
Uthi bengumphakathi bagcine bethathe isinqumo sokuwumisa kancane umbhikisho wabo ngoba benzela izaguga ukuba zikwazi ukuya emholweni nabagulayo bakwazi ukuyolanda imishanguzo ezibhedlela kwazise bekumi yonke into kungasangeneki kungasaphumeki endaweni.“Empeleni besihlele ukuthi uma izaguga seziholile nezakhamuzi zakwazi ukuyocoshacosha edolobheni ebese siphinde siwuvala unomphela umgwaqo kuze kube uHulumeni noMasipala bahlangabezana nezidingo zethu,”
Uqhuba uthi: “Njengoba esewadedelile amanzi eMseleni asisho ukuthi sesimile emzabalazweni wethu wokufuna izidingo usazoqhubeka ngoba kunezindawo ezingaphezulu kwezili-15 ezingakabi nawo amanzi. Asazike noma uHulumeni uzophinde indaba yazo ayisukumele ngoba sesize sabuyela emgwaqeni,” kuqhuba uNkwanyana.Empeleni le ntabamlilo egcine isiqhumile ngokwentuleka kwamanzi eMkhanyakude bese kuneminyaka ibila kodwa uMasipala wendawo noHulumeni bethalalisa.
IBAYEDE yexwayisa ngengozi yokuqhuma kwayo eminyakeni emihlanu eyedlule ukuba isukunyelwe kungakonakali. Ikhansela lendawo uMnu uThemba Nxumalo okhulume naleli phephandaba emasontweni amabili edlule wakuqinisekisa ukushuba kwesimo endaweni ngodaba lokwentula amanzi.
“Isimo simanzonzo,umphakathi uvale ngamathayi avuthayo yonke indawo. Kuvalwe nemigwaqo ngamatshe akungeneki.Umphakathi uvale imigwaqo ngayo yonke into ongayicabanga. Nathi nje singamakhansela sesihamba sijeqeza njengoba umphakathi usho ukusiqeda ngoba ucabanga ukuthi sinesandla ekungawutholini kwawo amanzi,” kusho uMnu Nxumalo. Uthi baze basizwa ukufika kweMeya uMnu uSolomon Mkhombe ozamile ukudambisa isimo ngokuwuchazela umphakathi ukuthi indaba yokweswelalakala kwamanzi ayihlangene namakhansela.
“Yize umphakathi ugcine usulwehlisile ulaka obulubhekise ngasemakhanseleni, kodwa sisahlalele ovalweni lokuthi bangasihlasela noma yinini njengoba lo mphakathi ubuye ucule ngathi usichaphe nangezinhlamba. Sibonga ukungenelela kwemeya ubaba uMkhombe okwazile ukusilamulela olakeni lomphakathi ngokuthi awuchazele ukuthi le nkinga yamanzi ingaphezulu kwethu nokuthi lolu daba lusingethwe nguMasipala,” kuqhuba uNxumalo. UNxumalo uthe inkinga yokwentuleka kwamanzi endaweni ekubeni kunedamu iJozini yindaba esineminyaka ikhona.
“Umbhikisho usukapakele ezindaweni ezahlukene. Nabezokuphepha basebenza kanzima ukuzama ukusilawula isimo kodwa asilawuleki,” kuqhuba uNxumalo. Omunye wabaholi bomphakathi, uMnu uSabelo Mnguni naye osekhaleni lombhikisho, uhambe emagameni kaNxumalo wagcizelela ukushuba kwesimo endaweni. “Umgwaqo u-R22 uvaliwe kusukela eMseleni kuya eMbazwana. Isimo asisalawuleki. IMeya uMkhombe ufikile ethi uzozama ukubhula umlilo kodwa kwanhlanga zimuka nomoya njengoba abantu kwayena bebesho ukumqeda. Naye ugcine ephuma esehlehla nyovane,” kusho uMnguni.
Uqhuba uthe umphakathi ubusuvele wavala yonke imigwaqo, izikole kwaze kwathinteka ngisho nesibhedlela saseMseleni. Uthi ngoLwesine lwangalelo sonto akekho obekwazi ukuvukela emsebenzini ngenxa yokuthi bengakuhambeki njengoba nezithuthi bezingabonwa nangalukhalo emgwaqeni. UMnu uMnguni uthe umphakathi ukhathele izethembiso ezenziwa ngosopolilitiki nezikhulu zikaHulumeni ezigcina zingafezekiswa.
Elinye ilungu lomphakathi kodwa ebelingathandanga kudalulwe igama lalo lahlebela intatheli yeBAYEDE ukuthi umphakathi othukuthele bese uhlele nokuyoshisa amahhovisi akwamasipala ukuzwakalisa ulaka lwawo.Unxuse uHulumeni ukuba alusukumele udaba lwamanzi eMkhanyakaude.“Nginovala lokuthi kuzogcina sekuphume nezidumbu. Abantu bazobhuqabhuqwa yindlala njengoba bengakwazi ukuya edolobheni kuphele nenyanga ngenxa yokuthi akuhambeki emgwaqeni,” kuqhuba umthombo.
Umthombo uqhuba uthi nokufunda kuphazamisekile njengoba izikole besezivaliwe. Abagulayo bengasakwazi ukuya emitholampilo kanye nasesibhedlela ukuyolanda imishanguzo.Nosopolitki okubalwa nabaphathiswa boMnyango Wezokubusa Nokubambisana, Nezindaba Zomdabu KwaZulu-Natal kanye noNgqongqoshe abehlukene aseke baphatha eMnyangweni Wezamanzi neNhlanzeko bebethembisa ukuyisukumela lendaba yedamu laseJozini eligweve nabalimi abamhlophe kodwa nabo bagcine bephume bengenzanga lutho. Owokugcina kulaboNgqongqoshe, uNkk uNomvula Makonyane wethembisa lomphakathi ukuthi uzoyilungisa ngokushesha lenkiyankiya yedamu laseJozini kodwa naye wagcina ehambe ijuba likaNowa.